4 Waxyaabood maalin kasta aad sameyso oo baabi'inaya awoodaada dhanka Sariirta - Aayaha
Home RAAXADA 4 Waxyaabood maalin kasta aad sameyso oo baabi’inaya awoodaada dhanka Sariirta
Waxyaabaha qaar ayaa si aanan la arkeyn ugu muuqda kuwo aanan dhibaato lahayn balse si daran kuu saameynaya.
Tusaale ahaan, ma ogtahay in waxyaabaha qaar ee aad maalin kasta sameyso ay si tartiib ah u baabi’inayaan awoodaada galmada?
Hoos ka aqri waxyaabaha aad maalin kasta sameyso ee burburinaya awoodaada galmada.
Markaad cunto cunno farabadan, miisaankaagu wuuka darayaa guud ahaan caafimaadkaagana halis ayuu galayaa. Balse intaas kuma eka waxaad noqoneysaa nin aanan waxba galin maadaama ay hoos u dhacayso awooddaada raganimo ee aad shaqada ku socodsiin lahayd.
Imisa saacadood ayaad hurudaa maalin kasta? Khubarada caafimaadka waxay amaaneyn in qofka uusan hurdin waxaan ka yareyn 7 saacadood. Ugu horeyn hurdada yari waxay saameysaa hormoonadaada taasoo sababeysa hoos u dhac ku yimaada socodsiinta shaqada sariirta. Marka labaad, jirkaaga ma helo nasasho ku filan oo uu shaqo adag ku qaban karo taasoo xaaladda kugu adkeyneysa.
Jimicsiga wuxuu keenaa in dhiigga ku socdo dhammaan qeybaha kala duwan ee jirka oo ay qeyb ka tahay xubnahaaga qaaska ah. Sidaa darteed haddii aadan maalin kasta jimcisan ama jirdhis sameyn, dhiigga sidii la rabay uguma soconayo qeybaha gaarka ah ee jirka sidaa darteed waxay saameyneysaa awooddaada galmada.
Sidoo kale inaad jirdhis sameyn weyso ayaa keeneysa inaad si daran u cayisho taasoo ah sabab kale oo hoos u dhigta awoodda galmada.
Sigaarka wuxuu dhaawacaa xididada dhiigga taasoo saameyneysaa waregga dhiigga. Daraasado badan ayaa sidoo kale soo bandhigay xiriirka dhow eek a dhexeeya hoos u dhaca galmada iyo cabista sigaarka.
Previous articleTilmaamaha Lagu Garto In Ninkaaga Uusan Dooneyn Inaad Kala Tagtaan
Next article3 Waxyaabood Oo Ragga Aysan U Sheegin Haweenka Ay Jecelyihiin Iyo Sababta
Aayaha editor - November 1, 2017 0
Dal muslim ah oo dadkiisa ka mamnuucay in aysan xannaaneysan karin...
Farrimo Aad U Diri Kartid Gacaliyahaaga Si Aad Ugu Muujisid Inaad...